【HOT】Nên trồng cây gì ở vỉa hè trước nhà đẹp & dễ chăm sóc? | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
【HOT】Nên trồng cây gì ở vỉa hè trước nhà đẹp & dễ chăm sóc? | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: 【HOT】Nên trồng cây gì ở vỉa hè trước nhà đẹp & dễ chăm sóc? | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Izityalo ezityalwe phambi kwendlu zinobukhulu obukhulu be-15cm okanye ngaphezulu ububanzi, umthi unombhobho omhle kwaye umthi unomphumela we-feng shui. Ukuze ukwazi ukukhetha ngokweemfuno ezingentla, yiyiphi imithi ekufuneka ityalwe ecaleni kwendlela phambi kwendlu?
1 Kutheni kufuneka utyale imithi ecaleni kwendlela?
1.1 Izityalo ezisecaleni kwendlela zenza indawo eluhlaza
1.2 Izityalo ezisecaleni kwendlela zinefuthe le-air conditioning
1.3 Izityalo ezisecaleni kwendlela zithintela uthuli
2 Yeyiphi imithi ekufuneka ityalwe ecaleni kwendlela phambi kwendlu? – Eagletree
3 Umthi wePoinciana
4 Ingwenya – Isityalo sasesitalatweni
5 Umthi weNacre
6 Umthi weLagerstroemia
7 Umthi we-Ironwood – umthi oluhlaza wasezidolophini
8 umthi wekrisimusi
9 Umthi weSesame – Umthi oluhlaza odumileyo esitratweni
10 Umthi weentyatyambo zentsimbi etyheli
11 Umthi we-oyile ubolile
12 Umthi weCamphor
13 Sang umthi
14 Umthi weCanary – umthi womthunzi wesitalato
15 Umthi weenkwenkwezi ezimnyama
16 Umthi wesundu wenqanawa
17 Umthi wemango
19 Umthi wegolide
Kutheni kufuneka utyale imithi ecaleni kwendlela?
Izityalo ezisecaleni kwendlela zenza indawo eluhlaza
Izityalo ezisecaleni kwendlela zinceda ekudaleni indawo eluhlaza kwizitrato, iindlela zokuhamba, kunye nezitalato zabahambi ngeenyawo. Wonke umntu uyazi ukuba imithi iya kunceda ukubonelela nge-oksijini kwaye ifunxe i-CO2 emoyeni, yenza umoya uhlaziyeke.
Izityalo ezisecaleni kwendlela zinefuthe le-air conditioning
Izityalo ezisecaleni kwendlela zinceda ekulawuleni umoya, indlu nganye ikhula umthi omkhulu, kwaye ezitratweni kukho imiqolo yemithi emidala eya kuba negalelo elikhulu kwi-air conditioning. Namhlanje, xa imozulu iya isiba mandundu mihla le, indima yemithi iya icaca ngakumbi.
Amaza obushushu bemihla ngemihla abeka iirekhodi ezintsha zamaqondo obushushu. Ezindleleni ngamanye amaxesha ukuya kuthi ga kwi-50-60 degrees celsius ngaphandle kokugqunywa kwemithi, ngalo lonke ixesha ukuhamba endleleni kuya kuba yinto ebuhlungu. Mininzi imifuniselo ekhawulezileyo ebonise ukuba imithi esecaleni kwendlela inokunciphisa amashumi amaqondo obushushu obuphezulu kwindlela.
Izityalo ezisecaleni kwendlela zithintela uthuli
Ungcoliseko lomoya oluphuma kumbhobho wezithuthi, eluthulini oluziswa ziimoto, amasuntswana othuli oluncinane axutywa emoyeni athunyelwa ngumoya ukuze abhabhe yonke indawo. Ngelo xesha, izityalo ezisecaleni kwendlela yayilikrele elingabonakaliyo elalithintela uthuli nomsi ekungeneni kwizindlu apho abantu babesokola ukufumana ukuhlaziyeka nokuhlaziyeka.
Yeyiphi imithi ekufuneka ityalwe ecaleni kwendlela phambi kwendlu? – Eagletree
Umthi wokhozi ngomnye we izityalo eziluhlaza ezidolophini odla ngokudibana naso xa udlula ezitratweni. Lo mthi unomthi omde, amagqabi abanzi, ngoko ke utyalwe ngeenjongo zokufumana umthunzi.
Ukongeza kwizitrato, imithi iphinda ityalwe kwiipaki eziluhlaza, ezibhedlele okanye ezikolweni.
Umthi we-phoenix ungomnye wemithi ehlala ityalwa ezikolweni, ehambelana neminyaka yabafundi. Ke ngoko, unokubona ngokulula umfanekiso wemithi kwiyadi yesikolo. Ngaphandle koko, imithi ikwatyalwa kwizitrato ezininzi njengemithi yokhozi ukwenza umthunzi.
Ngokufanelekileyo, umthi uqhele ukuba yi-10-20m ukuphakama, kubandakanywa amasebe amaninzi kunye namasebe okunceda amahlamvu ukuba ande kwaye atyebe. Ndiyabulela kuloo nto, umthi unako “ukolula” ukupholisa abantu ngeentsuku ezishushu zasehlotyeni.
Ingwenya – Isityalo sasesitalatweni
I-Crocodile ngumthi okwaziyo ukumelana nesiqu kunye nokwakheka kwesiqu esithe tye, amagqabi abanzi kunye ne-evergreen unyaka wonke. Uhlobo umthi womthunzi wesitalato Oku kulula kakhulu ukukhathalelwa kwaye akukho lula ukuhlaselwa zizinambuzane. Ukongezelela, umthi unenkqubo enzulu yeengcambu ezinzulu emhlabeni, amasebe athambileyo, ngoko akulula “ukuhambisa” kwiiqhwithi.
Ngenxa yezizathu ezingentla, umthi wengwenya uhlala ukhona kuluhlu lwezona mithi eluhlaza ezidolophini ezityalwe kakhulu namhlanje.
Yeyiphi imithi ekufuneka ityalwe ecaleni kwendlela phambi kwendlu? Igama elilandelayo alinakungabikho kuluhlu imithi yesitalato ngumthi womkhonja lowo. Esi sisityalo somthi esinobubanzi besiqu esikhulu kakhulu, ububanzi kunye namahlamvu aluhlaza ajikeleze umqheba. Ke ngoko, i-nacre ifanelekile kakhulu Tyala imithi yomthunzi wasezidolophini.
Okwangoku, imithi ihlala ityalwa kwimidibaniso okanye kumacala omabini eendlela ezihamba ecaleni kwezitrato, iipaki kunye nezikolo.
Bang Lang nguye izityalo zesitalato ngokwesiqhelo malunga ne-10-15m ukuphakama, yahlulwe yangamasebe amaninzi kunye namasebe. Umthi unamagqabi amade, abanzi kakhulu kwaye ashinyeneyo, ngoko ke utyalwe kakhulu ukwenzela umthunzi.
Umthi we-Ironwood – umthi oluhlaza wasezidolophini
Isityalo esilandelayo iNursery No. 1 efuna ukwabelana nawe yi-ironwood. Umthi waziwa ngelinye igama njengomthi we-linden. Le yenye ye izityalo eziluhlaza ezidolophini ukwenza umthunzi kunye nokudala imihlaba ezitalatweni, ezikolweni, kwiipaki, ezibhedlele, njl.
Ngaphambili, izityalo zentsimbi zazisasazwa kakhulu kwimimandla ephakathi nakumazantsi elizwe lethu. Nangona kunjalo, ngoku, umthi utyalwe ngokubanzi kwaye utyalwe ngokubanzi kuyo yonke indawo. Ubude bomthi buqhele ukuba yi 20-30m. Isiqu singwevu-mhlophe kwaye sinamaphiko amaninzi abanzi.
Umthi waziwa kakhulu ngokukwazi ukunika umthunzi. Akunjalo kuphela, iintyatyambo zomthi weKrisimesi nazo zinenkangeleko ekhangayo kunye nevumba elicocekileyo nelimnandi kakhulu. Kwaye ezi zezona zizathu ziqinisekisayo ukuba esi sityalo sityalwe njengokuba kunjalo namhlanje.
Ngalo lonke ixesha uhamba ngezitrato okanye undwendwela i-campus yesibhedlele, isikolo okanye ipaki, ngokuqinisekileyo uya kudibana nomthi womsedare.
Umthi weSesame – Umthi oluhlaza odumileyo esitratweni
Isityalo esilandelayo kuluhlu izityalo ezisecaleni kwendlela Idla ngokukhula namhlanje ukufumana umthunzi ngumthi wesesame.
Esi sisityalo esihlala sifumana inkoliseko kubantu abaninzi kuba seqela lemithi enqabileyo emi-4: “Sanh – Sung – Tung – Loc”.
Umthi weSesame ngumthi onesiqu esihle kakhulu kwaye esomeleleyo kunye neengcambu. I-canopy ibanzi kwaye inzima, ngoko inokupholisa indawo enkulu.
Ukongeza, lo mthi ukwavelisa amagaqa eentyatyambo ezibomvu eziqaqambileyo ezenza indawo ejikelezileyo iphile kwaye ibentsha.
Umthi weentyatyambo zentsimbi etyheli
Inyibiba etyheli ikwayenye yezityalo eziluhlaza ezizidolophini zombini ezibonelela ngomthunzi kwaye zinceda ukuhombisa ubume obujikelezileyo. Isizathu sikukuba ukongeza kwisiqu eside, i-canopy ebanzi nengqindilili, lo mthi ukwavelisa iintyatyambo eziqaqambileyo ezityheli ezifana nentsimbi.
Umfanekiso weentyantyambo ezityheli ezilukiweyo kumagqabi aluhlaza wenza lo mthi ube mhle ngakumbi kwaye ube nomtsalane.
Umthi we-oyile ubolile
Akubalulekanga kuphela kwintsimi yokwakha, iyeza kunye nokuhlobisa kwangaphakathi, i-oleander nayo iluncedo kakhulu kwimisebenzi yasezidolophini. Lo ngumthi omkhulu onesiqu esime nkqo, malunga ne-40-50m ukuphakama. Ukongeza, umthi unawo i-canopy ebanzi, amagqabi amakhulu kunye nokuguquguquka okuphezulu kuzo zonke iimeko zokuphila, ngoko ke ityalwe kakhulu ezitalatweni okanye kwiipaki.
Esi sityalo sikwanakho ukudumba neentyatyambo ezincinci ezinestamens ezininzi kwaye phantse akukho sikhondo. Malunga noNovemba-Disemba rhoqo ngonyaka, uya kuqalisa ukubona iintyatyambo zidubula emasebeni.
Umthi weCamphor sisityalo somthi esinesiqu esikhulu kakhulu kunye namagqabi ahlala eluhlaza unyaka wonke. Ukuphakama kweentlanzi ngokuqhelekileyo malunga ne-20-40m kwaye ububanzi bomzimba bufikelela kwi-200cm. Amagqabi aneziqu ezide, ezimenyezelayo kwaye ezigudileyo, zikhula ngokutshintshana ecaleni kwamacala amabini epetiole. Ayizintyatyambo kuphela ukusuka kuMatshi ukuya kuAprili, umthi ukwavuthwa ukusuka kuOktobha ukuya kuNovemba.
Ngoku, Imithi yeCamphor ityalwe kwizitalato zasezidolophini kungekuphela nje ukufunxa iiyoni ezinzima ezinceda ukucoca umoya, kodwa kunye nokwenza umthunzi owongezelelweyo.
Ngokuqinisekileyo kubantu abaninzi, igama elithi “umthi wobunewunewu” liyinto engaqhelekanga. Umthi wodidi izityalo zesitalato ukuya kwi-15 m ukuphakama, i-25 cm ububanzi. Ubutofotofo bentyatyambo neziqhamo ezimile okwenkwenkwezi ezitsolo ezintlanu. Xa sivuthiwe, esi siqhamo siyaqhekeka kuvele amaso ahlukileyo amnyama abangela ukuba lo mthi ube mhle.
Uhlobo umthi womthunzi wasezidolophini Lo mthi unomthi, ubomi obude kwaye uhlala uluhlaza unyaka wonke. Ngokukodwa, umthi omuncu ngumthi onamagqabi amakhulu kwaye awuwi, ngoko ke kubaluleke kakhulu ukuba ukhethwe ukwenza. imithi yesitalatoizakhiwo, iindawo zasedolophini,…
Umthi weCanary – umthi womthunzi wesitalato
Umthi weCanary ungakhula ukuya kwi-10-20m ukuphakama, ukhule ngokukhawuleza. Ubukhulu besiqu bu malunga ne-40cm. Ixolo elingwevu-mhlophe, inyama ipinki, 6–8mm ubukhulu, kwaye isoloko isetyenziswa njengedayi ebomvu.
Amasebe agudileyo, amagqabi ahlanganisiweyo kanye, atshintshana, ubude be-15-60 cm kunye ne-3-8 iperi yamagqabi avuthulukileyo. Isityalo sikhula kakuhle kwindawo enelanga kunye nemvula, ayifanelekanga kwimozulu eyomileyo okanye ebandayo. Ngoko ke lukhetho kwakhona imithi yesitalato.
Ngenxa yokuba umthi uneentyatyambo ezintle, i-canopy ebanzi, ikhula ngokukhawuleza, ayikude kakhulu, kwaye ineengcambu ezithe tye kunye neziqinileyo, umthi we-canary ufanelekile ukunikela ingqalelo njengomthi womthunzi we-landscape, umthi wesitrato.
Umthi weenkwenkwezi ezimnyama
Umthi weenkwenkwezi ezimnyama usasazwe ngokubanzi kulo lonke ilizwe, ngakumbi kwi-Southeast and South Central Highlands. Umthi omkhulu onesiqu esithe tye, esimbhoxo, ukuya kuthi ga kwi-30m ukuphakama. I-trunk ineentanda ecaleni kwengqolowa, emnyama, i-core yangaphakathi ibomvu. Amagqabi ashinyene ngepyramidal, amasebe makhulu, amade, athe nkqo. Ityalwe ukuhombisa imbonakalo-mhlaba, ufumane umthunzi.
Umthi we-Black Star kunye neenzuzo ze-trunk eqondileyo, amaxesha amane amaqabunga aluhlaza, ukukwazi ukubonelela ngokuzinzile, okuqhelekileyo, umthunzi wonyaka kuya kuba yinto ekhethekileyo kwizitrato. IHanoi inesitalato iLo Duc okanye iSaigon ikwanazo izitalato ezintle ezidumileyo ezinxulumene nalo mthi.
Nge imisebenzi ye-landscape enkulu, imisebenzi yasedolophini Ukuba ufuna umzobo woyilo, olu lukhetho olufanelekileyo kakhulu. Iya kwenza imbonakalo-mhlaba yale ndawo iphile kwaye ithandeke ngobuhle.
Umthi wesundu wenqanawa
Umthi wesundu wase China ngumthi wesibini, uhlala uluhlaza, umthi omdala onobude obufikelela kwi-15m – 25m, kuxhomekeke kwiimeko zokukhula. Imithi ityalwe kwiindlela zokuhamba, iipaki, kwiindlela zesitrato… ukuvala uthuli kunye nokuthintela ilitha kanye embindini wesahluli sendlela, ukwenza imbonakalo-mhlaba icace ngakumbi.
Isiqu si-cylindrical, malunga ne-20 – 30 cm ububanzi. Amagqabi agxininiswe phezulu, i-blade eluhlaza ekhanyayo efana ne-fan, ihlulwe ibe yimitha emininzi. Amagqabi amadala akhula kwicala lomhlaba, amagqabi e-Banh Tieu akhula emacaleni kwaye ngokuthe tye, amagqabi amatsha akhula ngokuthe nkqo, enze i-canopy engqukuva, njengomthombo otshiza macala onke.
Iintyatyambo zimbini, zizenzekela, zidibene. Imithi yesundu ifana nokukhanya okupheleleyo, njengomhlaba ofumileyo, otsalwe kakuhle, inokunyamezela imbalela kangangeenyanga ezininzi zonyaka.
Umthi wemango ngumthi omkhulu onobude obuyi 10-20 m. Njengomthi omde, kufuneka utyalwe kwindawo ezibanzi nezivulekileyo. Amagqabi omthi we mango aphelele, ayatshintshana, amile amagqabi alula, amagqabi ambhoxo, aluhlaza obukhazimlayo obumdaka ngaphezulu, abhatyile ngaphantsi kwaye anemithambo ephakamile. Nyaka ngamnye, imango ivelisa amahlumela ama-3-4 ngokuxhomekeke kwindidi kunye nemozulu.
Iintyatyambo zeMango zikhula ngamaqela phezulu kumasebe, amaqoqo emango amade kakhulu malunga ne-25 cm, kwi-inflorescences kukho iintyatyambo ezincinci ezityheli.
Usiba luvela kumazwe ashushu aseAsia. Ipeni ngumthi ovela eVietnam, ofumaneka kwi-Central Highlands kumahlathi ahlala eluhlaza. Umthi weViet ngowesityalo esinemithi ephakathi, ubude obuyi-10-20m, nomzimba welatex omhlophe, amasebe anamagqabi amaninzi achumileyo.
Umthi wokubhala unamagqabi alula, anomda othe tye. Umthi uneentyatyambo ezimhlophe ezikhula kwi-axils yamagqabi, iintyatyambo zinevumba elimnandi. Umthi unamahlamvu aluhlaza, abumbene, aluhlaza unyaka wonke, akafane ukhuphe amagqabi.
Umthi mhle, unamagqabi amahle, ngoko ke usetyenziswa rhoqo njengomthi wokwakha ukudala imihlaba yasezidolophini efana noku: ukutyala izityalo ezizimeleyo ngokudibanisa nemithi yeentyatyambo, ukutyala kwiimbiza, ukutyalwa ngamaqela emi-3-5 yemithi kwiipaki. Ikhampasi yesikolo, indawo yokulala, indawo yokuhlala, iofisi okanye ityalwe kwimiqolo yesitrato, ecaleni komlambo, ityalwe kwigadi yeevillas…
I-Vang Anh ngumthi ophakathi, ukuphakama komthi ukusuka kwi-5 ukuya kwi-20m, ububanzi be-trunk bufikelela kwi-25cm. Icanopy ingqukuva, ixolo lingwevu-mdaka. Amasetyana amatsha amfusa kancinane emva kokujika abe luhlaza kwaye aguga abemdaka omnyama. Iintyatyambo zityheli, i-bisexual okanye i-unisexual kunye neengcambu ezifanayo, i-sepals iyanyamalala. Ixesha leentyatyambo ukusuka kuEpreli ukuya kuMeyi, ixesha leziqhamo ukusuka ngoJulayi ukuya kuOktobha.
UVang Anh ngumthi omkhulu onecanopy ebanzi enika umthunzi kunye neentyatyambo ezintle ezityheli unyaka wonke. Imilo emide, iintyatyambo ezintle, umthunzi kunye nohlaza unyaka wonke, ngoko ke umthi weVang Anh ubandakanyiwe kuluhlu lwemithi eluhlaza. kwiindawo zasezidolophini , idla ngokutyalwa ecaleni kwendlela, ecaleni kwezitrato, iipaki…
Yeyiphi imithi ekufuneka ityalwe ecaleni kwendlela phambi kwendlu? Ngentla sisishwankathelo sezinye izityalo ekufuneka zityalwe ecaleni kwendlela. Zininzi iindidi zemithi yomthunzi, kodwa ezi zityalo zingasentla zikhethwa ecaleni kwendlela ngenxa yokukhula kwazo lula, ukukhathalelwa ngokulula, kunye neempawu ezingenazinambuzane. Ukongeza, le mithi inamagqabi abanzi kwaye amade anokudala umthunzi omkhulu kwaye ingathinteli umbono womqhubi. Ukongezelela, umthi ngamnye unobuhle kunye nombala weentyatyambo, ngoko kuya kwenza iindlela zibe yimbongo kwaye zizise iimpawu zayo.
【HOT】Nên trồng cây ăn quả gì trong vườn nhà phố nhỏ, lại dễ chăm sóc? | Hatgiongtihon.net